Cocaine na ịde blọgụ | Martech Zone
Cocaine na ịde blọgụ
Wenezdee, Jenụwarị 31, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Lewis Green dere ọmarịcha akwụkwọ, akpọrọ Ebee ka Anụ ehi na ịde blọgụ?, lelee ya mgbe ị nwetara ohere.
Mgbe m na-aga mahadum, otu akwụkwọ na nyocha m mere bụ ị addictionụ ọgwụ ọjọọ. Ana m arịọ mgbaghara tupu oge eruo maka ịnyeghị otuto maka isi mmalite m, mana nke a bụ naanị ya. Onye na-eri ahụ riri ahụ na-eme ka omume ha dị na nkezi na afọ nke itoolu nke mgbake. Afọ nke itoolu! N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, guzobe ụlọ ọrụ mmezi taa, ị gaghị eweghachi elele ahụ maka afọ itoolu.
Nsogbu ahụ? A na-eme ndi ochichi ndọrọ ndọrọ ọchịchị n’ime afọ 4 ọ bụla. Ihe a na-ekwu bụ na ọ bụrụ na obodo mepere emepe nwere nnukwu nsogbu na cocaine, mpụ na-eso… ezu ohi, ọgụ, igbu ọchụ, wdg. Ndị tozuru oke ndọrọ ndọrọ ọchịchị tozuru oke 'idozi' nsogbu ahụ. Mana ha chọrọ afọ itoolu iji dozie ya, ọ bụghị ya? Hmmm. Ha nwere naanị afọ anọ.
Ya mere ihe ngwọta na-agbanwe site na mgbake gaa n'ụlọ mkpọrọ. Ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-aga nke ọma anaghị enyere aka n'ịkwalite mgbake nke onye ọrụ cocaine, ha na-enweta ọtụtụ n'ime ha n'okporo ámá dịka ha nwere ike tupu ntuli aka ọzọ. Ha enweghị nhọrọ ọ bụla. Ndi mejuputara ihe ha. N’ihi nke a, ụlọ mkpọrọ anyị juputara na ndị ji ọgwụ ọjọọ eme ihe bụ ndị a ga-aga n’ihu ịhapụ, tụọ mkpọrọ, ịtọhapụ, mkpọrọ, wdg.
Ogologo oge, ọnụego ụlọ mkpọrọ na-ebelata ọnụ ahịa ụlọ ọrụ mgbake. Mgbe ị na-a lee anya na kwa afọ mmefu ego na "Agha na Ọgwụ" ke United States, ezie, ị ga-ahụ na mmefu ego maka mgbake bụ sonso a spec ke ofụri mmefu ego. Enweghị njedebe, ọ nweghịkwa olileanya ọ bụla belụsọ na sayensị nwere ike ịbanye n'ụzọ ma belata usoro mgbake ahụ.
Kedu ihe ụwa na-eme na cocaine na ịde blọgụ?
Blogde blọgụ dị ka atụmatụ ịzụ ahịa bụ naanị nke ahụ, atụmatụ. De blọgụ abụghị ihe omume. Ejiri post ọ bụla na nke ikpeazụ ma duga na nke ọzọ. Otu ntinye ederede agaghị enweta gị ebe ọ bụla, mana ọtụtụ puku n'ime ha ga-amalite ịmepụta obodo nke ndị na-agụ ya na nkọwa doro anya nke ihe ọmụma gị, ahụmịhe, na ụdị mmadụ gị. Ha ga-emekwa ka aha gị na njirimara gị, ikike gị, yana ogo ogo engine gị.
Ya mere, ... ebe bụ ihe ROI na nke ahụ?
Ikwesiri inye ROI maka ahia ahia gi, zighi ezi? I nweela blọọgụ iri na websaịtị nke ụlọ ọrụ gị, na-etinyekarị ndị isi 10 kwa izu iji dee ha na ndị ọrụ IT iji kwado ha. Nke ahụ bụ nnukwu ego na ihe ahịrị ahụ, ọ bụghị ya? Na mgbe otu afọ gasịrị, gịnị ka ị ga-egosi maka ya? Have nwere azụmahịa karịa? You nwere ọtụtụ uru?
Nke a bụ ebe nsogbu ahụ na-eweta isi ya jọrọ njọ. Usoro mmefu ego nke afọ ahụ agwụla ma ị nweghị ihe ị ga-egosi. Onweghị otu n'ime ndị ahịa ọhụụ gị nwere ike ịkọwapụta dị ka nke sitere na blọọgụ gị. Ihe a anaghị arụ ọrụ! Ọ bụ ihe niile Web 2.0 hype! Anyị anaghị ede blọgụ na anyị na-enwetakwu ndị ahịa. Anyị na-azụta ọkọlọtọ mgbasa ozi ma ha na-eme nke ọma karịa blog anyị.
Ha ji n'aka.
Nsogbu dị na mgbasa ozi bụ na ha anaghị ewuli aha gị. Ha anaghị ekwe ka atụmanya gị ma ọ bụ ndị ahịa gị nwee mkparịta ụka. Ha anaghị enyere aka njikarịcha njin ọchụchọ. Ha adighi ebute ire onu ahia. Ha anaghị enyere aka na njigide ndị ahịa.
Ya mere kama ịgwọ mmekọrịta gị na mgbake gị na nlekọta ogologo oge, ị ga-ahọrọ ịhọrọ ịtụba ya n'ụlọ mkpọrọ. Usoro ahia gị na-abụ ọnụ ụzọ na-agbanwe agbanwe nke ụlọ mkpọrọ purchased mgbasa ozi zụrụ, nsonaazụ mediocre, mgbasa ozi zụrụ, nsonaazụ mediocre, na na na na na.
Ọ dịzịrị gị. Okwu a dị ezigbo mkpa. Ọ bụrụ na ị dị njikere iwepụta oge na akụrụngwa iji wuo ọnụnọ na ikike gị n'ịntanetị (yana ị nwere ikike iji wepụ ya), ị ga-ahụ nsonaazụ ya. Akara gị ga-ewusi ike, ekwentị gị ga-ada ụda, ị ga - ahụ na ndị ahịa, ndị na - agụ akwụkwọ, ndị na - agụ ya, ndị enyi na akụnụba na - enweghị atụ. Ga-ahụ weebụsaịtị gị ka ị na-elebara anya karị.
Otu onye ọrụ ibe m na-amalite azụmaahịa ha n'ịntanetị na teknụzụ ịde blọgụ gwara m n'oge nri ehihie, "Ebe ọ bụla anyị lere anya maka ozi na ịde blọgụ, anyị na-ahụ aha gị Doug!". N'ezie ọ bụghị ikpe ma ọlị. Abụ m ọ bụghị blogger A-List na aha m adighi ebe niile. Agbanyeghị, ọ kwụpụta mgbe ha hụrụ ya n’ihi na ha ma m.
Yabụ kedu nloghachi gị na itinye ego na ya, Doug?
Anọ m na-ede blọgụ ihe na-erughị otu afọ ma nwee ọkara iri na abụọ ndị ọzọ na ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ, enwere m di na nwunye A-listers gara na saịtị m ma kwuo okwu na ya, enwere m onye editọ gụọ akwụkwọ m ' m na-ede (ọ nyere m ezigbo ndụmọdụ!), A gbara m ajụjụ ọnụ na telivishọn na akụkọ mpaghara, a na-enye m mmekọrịta na azụmahịa, enwekwara m ọtụtụ ndị enyi. Enwere m ego karịa n'akpa m? Eleghị anya ọ bụghị… ma ọ na-abịa.
Aga m adị njikere ịrụ ọrụ na afọ 9 ọzọ a, mana tụkwasị m obi, agaghị m eme ya. Nsonaazụ ga-abịa ebe a n'oge adịghị anya. A di na nwunye izu gara aga, M nwere ihe magburu onwe nri ehihie na CEO nke Bitwise Ngwọta ma ọ jụrụ m ajụjụ ahụ, "Ebee ka ROI dị?"
Ndi ROI na abia, ekwuru m. Eji m ntinye aka blọgụ m gaa kọleji. Mgbe ịmalitere kọleji ma tinye ọtụtụ narị puku dollar na agụmakwụkwọ, ị naghị akwụsị nkeji ọ bụla ma ọ bụ afọ ọ bụla wee jụọ ebe ROI dị. Know maara na ọ na-abịa n'ihi na ị na-ewulite ikike gị, ntụkwasị obi gị, ahụmịhe na agụmakwụkwọ gị.
Ana m atụ anya ngụsị akwụkwọ m. Amaghị m mgbe ọ ga-abịa, mana ọ ga-adị ebe a tupu ị mara ya.
Anyị na -aga Dapa Bowl!
Onye na-edeba aha gị ọ nwere ike belata gị?
Feb 1, 2007 na 5:51 PM
Ezigbo ozi, Doug.
Feb 1, 2007 na 7:32 PM
Mar 29, 2007 na 3: 25 PM
Edemede dị oke mma, Doug. Tụlee nke a ọzọ A-ndepụta blogger onye na-eme na-nnọọ obi umeala!
Ọkt 17, 2007 na 2:10 PM
Mmasị..ị jikọtara ọtụtụ okwu .. Anyị ga-echere ntinye maka ngụsị akwụkwọ gị!